RAKOTOARIVELO MAMY : Tsy misy ambonin’ny lalàna eto. – MyDago.com aime Madagascar
RAKOTOARIVELO MAMY : Tsy misy ambonin’ny lalàna eto.
Tena faly aho hoy ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy androany teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka mifankahita aminareo vahaoka. Ny vahoaka mpomba ny filoha Ravalomanana Marc hoy izydia vahoaka matahotra an’Andriamanitra. Isika na henjehina dia vahoaka an’Andriamanitra ka tsy mankahala fa mivavaka ho an’ireny namantsika ireny, ka tsy avy aty amintsika no hiavian’ny fanafitohinana. Raha nivoaka hoy izy ny didim-pitsarana navoakan’ny CES dia nilaza ny filohan’ny Ceni-T hoe mampalahelo loatra ilay didy. Tsy azo ivalozana. Teo daholo anefa hoy izy ny fikambanana iraisam-pirenena, laharana faharoa i Neny tsy nisy niteny, tampotampoka eo indray ny faha 10 May dia milaza indray fa tsy mety io. Fa inona no hatahorana hoy ny fanontaniana napetrany. Ny CES na lazaina fa tsy ara-dalàna dia didy tsy azo ivalozana no navoakany . Tsy misy ambonin’ny lalàna eto hoy Mamy Rakotoarivelo na ny vahoaka Malagasy, na ny fikambanana iraisam-pirenena, tsy sanatria akory ny fikambanana iraisam-pirenena no hanosika antsika handika lalàna. Tsy azo ekena izany hoy izy. Ohatra ny tondrozotra efa lasa lalàna io, izay tsy nampihatra azy dia tsy manaran-dalàna. Ny solontenan’ny fikambanana iraisam-pirenena hoy izy dia nilaza fa aleo tsy mody ny filoha Ravalomanana Marc, izy izany no tsy manaran-dalàna. Misy milaza hoy ity mpanao politika ity fa avereno ny fifidianana filoham-pirenena. Izahay milaza hoy izy fa misy tombontsoan’ireo firenena afrikana izany satria ny vola topkony hoantsika dia lasany izy ireo. Noho izany aoka ho mailo isika ary hiteny an’i Chissano izahay hoe tsy manaiky holalaovina intsony. Lazaina hoy izy fa ny tsy fipetrahana enimbolana no tsy maha ara-dalàna an’i Neny. Angaha fidiny ho azy ny tsy nahateto teto Madagasikara ny tenany. Ny tenanay sy ny Me Hanitra hoy izy no saziana hono, maninona no tsy saziana ny Sadc tsy nampihatra ny tondrozotra, ny vondrona afrikana. Rehefa metimety aminy dia ekeny. Tsy maintsy atao hoy Mamy izay hahavitan’ny fifidianana amin’ity taona ity, raha amin’ny faran’ny volana Septambra dia mbola azo atao ny fifidianana hoy ny Ceni-T. Raha hahemotra amin’ny fotoana hafa io dia tsy fantantsika ny hevitry ny sasany hanitatra ny tetezam ita ao anatin’ny volana maromaro. Raha ho avy i Chissano hoy ity olomboantendry ity amin’ny Talata dia hohazavainay aminy hoe izao no tian’ny vahoaka Malagasy fa aza teriterena ary avelao hisafidy malalaka ny vahaoaka satria fifidianana demokratika , mangaraharaha, ary eken’ny rehetra no tadiavin’ny vahoaka. Momba ny FFKM dia nambaranyfa mankasitraka izany isika Movansy Ravalomanana, ary misaotra ny FFKM hitondra ny fampihavanana marina. Mamporisika azy ireo isika.
RAKOTOARIVELO MAMY : HIROTSAKA HO FIDIANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 6 juillet 2013 Catégories Politique
2 pensées sur “RAKOTOARIVELO MAMY : Tsy misy ambonin’ny lalàna eto.”
Na dia mipasoka ny efa malama aza ianao Andrimatoa Mamy Rakotoarivelo, dia lefy ihany, efa fanata-poko fantam-pirenena anie ilay raharaha e, . Fa ireny mbola tsy fantatra loatra ireny no tokony ho resahina, ohatra nisy ve, hetsika diplomatiqka nataonareo ? nisy ve firenena lehibe tsy manaiky an’i Lafrantsa ? misy fa fanoherana ataonareo, ohatra any @ fitsarana ? Azo saziana ve ireo miaramila manao politika ?….
Mbola manatena anefa fa tena hiresaka matotra @ Chissano ny ankolafy ary teny tsy hitsitsy ny marina fa hamaky batsila izany, toy ny hoe, mitongilana ianao A/toa Chissano, ny fihetsikao no miteraka olona eto aminay, tsy ekena ny asanao, ka aleonay olon-kafa avy @ tany tsy miteny frantsay sns… Ataovy mazava mihitsy ny resaka atao aminy. Dia izay resaka izay no entina eo @ MAGRO avy eo… Iany ka tena tolona fa tsy manafosafo sy tsy sahy mamely mafy… Ny bainga voavadikareo no hanamarinanay ny asanareo niditra ao @ io tetezamita mampijaly vahoaka io.
7 juillet 2013 à 22 h 33 min
Mazava Be ny voalzan’i lazalazao eto ary hamafisiko ihany fa
» Bainga mivadika no endrasanay fa tsy manetsik’eloka eo »
Ahoana ireo fitaovam-piadiana maherivaika ireo atao inona??.iza no ho potehina @’ireo??
mba misy fe-petra raisinareo ve @’ireo mpikaraman’ady ireo???sa mbola misaotra an’i
presidà rajoelina fa feno fiadiana maherivaika hiandrasana an’i dada ny tanan?efa maty
paika izao an!!
Bla bla bla……..tsy hita izay mba ezaka mivaingana fa toa vao maika MILENTIKA ANY @
FARAHANTSANA NY FIRENENA.
Précédent Article précédent : ME HANITRA RAZAFIMANATSOA : Ny Movansy Ravalomanana dia tsy manala ny maha kandidà an’i Neny.
Suivant Article suivant : Lalao RAVALOMANANA : nitso-drano ny kilonga hanala fanadinana